Esorin’i Filipina Mialohan’ny Fitsidihana “Famindram-po sy Fangorahana” Hataon’ny Papa Ireo Mpivarotra Madinika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2015 18:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, čeština , polski, Aymara, বাংলা, English
Andro vitsy nialoha ny fahatongavan'ny Papa Francis ao Filipina, esorina eo amin'ny Kianja Luneta ao Manilla ireo mpivarotra madinika. Voaomana hitarika fotoam-pivavahana eo amin'ny Luneta ny Papa, kianja voalohany ho an'ny fahalalahana ao amin'ny firenena.
Tamin'ny herinandro lasa, nilazàna ireo mpivarotra mba handao ny kianja ho fanomanana ny fitsidihan'ny Papa. Nambaran'ny Kaomitim-Pirenena Ho Fampiroboroboana Ireo Vala fa teny midina avy amin'ny polisy sy ny lapan'ny filoha io, tafiditra ao anatin'ireo fifandaminana ho fiarovana ny fahatongavan'ny papa.
Gerry Serue, mpitondra tenin'ny Kilusan Para Sa Disenteng Kabuhayan (Hetsika Hisian'ny Fivelomana Mendrika), nanakiana ireo manampahefàna ho mampiasa ny anaran'ny papa handravàna ny fiveloman'ny mahantra :
Nanontany tena ihany koa ny sasany tamin'ireo mpivarotra sao hisolo toerana azy ireo eo amin'ilay kianja ireo talantalam-pivarotana sakafo tsara voatra. Nomarihan-dry zareo fa iray amin'ireo mpanome tan-tsoroka tamin'ny fanontàna ireo lambatsilena nasiana soratsoratra ho an'ny Eglizy Katôlika ny McDonald. Teddy Casino, mpikambana fahiny tao amin'ny antenimiera mpanao lalàna, dia nanontany raha toa ny tranokely fivarotan-tsakafon'ny McDonald ka homena alàlana ho ao amin'ilay kianja :